mercredi, 22 novembre 2017 18:33
Permis biométrique: Tsy manaraka “norme” ny eto Madagasikara ?
Vehivavy teratany Malagasy fa ampielezana any Etazonia, mipetraka any Washington DC no sendra olana raha nikarakara ny fahazoana “permis” tany an-toerana.
mercredi, 22 novembre 2017 18:26
Fanafihana mitam-piadiana: Dimy mianadahy voasambotra aty Ambato Boeny
Nanafika tokantranona mpivady tao Tsararivotra - Ambato Boeny izy ireo ny 17 novambra 2017 teo. Lasan'ireo olona nanafika tamin’izany ny vola 05 hetsy Ariary sy ny finday rehetra tao an-tranon’izy mivady.
Nitondra antsy maranitra sy vy ireo mpanafika ireo, nanatanterahan’izy ireo ny asa ratsiny.
Niainga avy amin'ny fikarohana nataon'ny Polisim-pirenena taty Ambato Boeny no nahafahana nisambotra azy ireo.
Natolotra ny Fitsarana ao Mahajanga androany ity raharaha ity.
RNT8 Morondava -Bekopaka: Hasiam-panamboarana
Lalana mirefy 164 km ity mampitohy an’i Morondava amin’i Bekopaka ity, mandrafitra ny RNT8, izay hasiam-panamboarana izao. Famatsiam-bola avy amin’ny Vondrona Eoropeana no hanatanterahana ny asa.
Hisarika mpizahatany bebe kokoa ny fahavitan’io lalana io, ary dia hahazo tombony amin’izany ny Kaominina Bekopaka, izay vavahadin’ny Tsingy, ary koa ny Faritra Melaky.
mercredi, 22 novembre 2017 18:17
Fianarantsoa: Miady amin'ireo fanorenana tsy nazahoan-dalana ny fiadidiana ny Kaominina
Mitohy ny asa fanadiovana ny fanorenana tsy ara-dalana eto amin'ny Tanànan'i Fianarantsoa. Taorian'ny hetsika fanesorana ireo trano kely fivarotana mihoatra ny faritra azo anorenana dia ireo kiôska tsy manara-dalàna indray no anatanterahana izany hetsika izany.
Manembatsembana ny lalan'ny mpandeha izy ireny ary miorina tsy nazahoan-dalana ihany koa.
Nisy ny fanalàna sy fandravana azy ireny omaly 21 novambra teto Fianarantsoa. Tsy mbola misy resaka hatreto ny fepetra ho raisina momba ny trano miorina ambonin'ny lakandrano izay nampifanolana ny servisim-panjakana sy ny mpandraharaha manao izany. Manahaka izany koa ny trano mijoalajoala naorina tamin'ny tanin'ny Kaominina namidin'ny PDS teo aloha ka efa namoahana fanapahana avy any amin'ny Ministera voakasika tamin'izany fotoana izany.
Ireo kiôska sy trano fivarotana tsy manara-dalàna ireo hatramin'izao no anatanterahana fanadiovana na “assainissement”.
mercredi, 22 novembre 2017 15:14
Zimbabwe: Emmerson Mnangagwa eo ambaravaran'ny fitondrana
Rehefa nametra-pialana omaly talata 21 novambra ny Filoha Mugabe, dia voatonona hatrany hatreto ny anaran'i Emmerson Mnangagwa, izay Filoha Lefitry Mugabe teo aloha, fa noroahina ary nitsao-ponenana mihitsy satria tsy nifankahazo tamin'ny vadin'ny Filoha Mugabe Grace.
Io fanesorana an'ity filoha lefitra izay lasa lehiben'ny mpanohitra ity moa no anisan'ny nampirodana izao fanjakan'i Mugabe izao, satria ny Tafika dia tsy nanaiky hitsabatsabahan'ny vadin'ny Filoha amin'ny raharaham-pirenena.
Raha ny resaka mandeha dia amin'ny zoma 24 novambra izao izy no hapetraka hitantana ny Firenena mandritra ny 03 volana, satra dia ny taona 2018 no tsy maintsy anaovana fifidianana.
Ny Filohan'ny Firaisam-be afrikanina omaly, tany Paris dia nilaza fa izay Filoha apetraka eo dia tsy tokony hilatsaka Kandida ho Filoham-pirenena ho avy eo, ka asa na anaiky an'izay ity Flohan'ny mpanohitra ity.
Izy moa dia andrasana any Zimbabwe anio hariva raha mbola nitsaom-ponenana any ivelany izy izao .
(Sary nindramina RFI: Grace Mugabe sy Emmerson Mnangagwa)
Okinawa: Nianjera ny fiaramanidina mpiady amerikanina
Raha nanao fanazaran-tena sy fanarahamaso fanao mahazatra teny ambony ranomasina tany atsimo atsinanan'ny Okinawa Japon ity fiaramanidina amerikanina ity, izay amonjy ny sambo mpiady Ronald Reagan dia niajera tao amin'ny ranomasin'ny Philippines.
Nitondra mpandeha 11 hatramin'ny mpanamory izy ity, ny 08 no avotra, ny 03 ambiny kosa dia mbola hifampitadiavana any andranomasina amin'izao.
Mety fahasimbana ara-tekinika no antony izao raha ny tombatombana.
(Sary nindramina: Sambo Ronald Reagan manao fanazaran-tena)
Bosnie: Namoaka didy managadra mandram-pahafaty an'i Ratko Mladic ny TPIY
Anio alarobia 22 novambra 2017 dia namoaka didy managadra mandram-pahafaty an'i Ratko Mladic, lehiben'ny Tafika Serbes tany Bosnie ny Fitsarana iraisam-pirenena any La Haye.
Famonoana misy abibiana nandritra ny ady sy fandrimpahana olona tamin'ny 1992-1995 no vesatra anenjehana azy (crime de guerre et crimes contre l'humanité).
Ireo mpomba azy moa dia nilaza, fa mbola tsy tonga tany La Haye akory i Ralto Mladic dia efa vita ny fitsarana azy. Ary dia mijanona ho reharehan'ny mponina any Serbes izay niala an'i Sarajevo ity lehiben'ny Tafika ity, satria tsy maintsy naka fahefana izy ho fanganana ny Firenena Serbes any Bosnie.
Olona tany amin'ny 100 000 moa no maty tamin'iny ady iny, ary mpifindra monina maherin'ny 2,2 tapitrisa izay Bosniaka Silamo no betsaka tamin'izany.
Ny ady tany Bosnie-Herzégovine moa dia ady teo amin'ny mponina Serbes, Croates ary Bosniaques. Ny Tafika Serbe dia nanafika an'i Bosnie-Herzégovine rehefa nanao fanambarana haleotena izy taorian'ny fivakisan'ny Repoblika sosialista Yougoslave sy ny fianjeran'ny kaominista tany europe atsinanana ka nampirodana ny rindrin'ny Berlin ny taona 1989.
mercredi, 22 novembre 2017 11:57
Marolambo: 850 Ar ny kapoakam-bary, tapaka ny lalana
Velon-taraina ny mponina aty amin’ny Distrikan’i Marolambo ankehitriny. Midangana izay tsy izy ny vidim-piainana. Tafakatra 850 Ariary ny kapoakam-bary, miaka-bidy toraka izany koa ireo entana ilaina amin’ny fiainana andavanandro.
Manampy trotraka izany ny fahasimban’ny lalana vokatry ny fahasimban’ny fitaovana fampitana fiara ao amin’ny reniranon’i Menagisa, izay mampitohy an’i Marolambo amin’i Mahanoro. Mivezivezy mankany amin’ny tanànan’i Sahely io fitaovana io.
Efa aman-taonany maro no misy manamboatra io lalana io nefa dia tsy mety tena vita, potika ampitoerana indray aza, ny fitrandrahana sy ny fivoahan’ny harena toy ny hazo sarobidy indray no mihazakazaka.